Warka - SHIRKADA SHANGHAI OO AY DHIRTAY QORAALKA QALABKA VOLVO OO KU GUULEYSATAY KA QAADASHADA QALABKA 40,000TH
Bishii Diseembar 23, 2020, cutubka 40,000th ee ay soo saartay shirkadda Volvo Construction Equipment ee warshaddii Shanghai ayaa si rasmi ah xarigga uga jartay xarigga isku imaatinka, taasoo calaamad u ah guul kale oo loo qabtay qalabka dhismaha Volvo ee Shiinaha muddo 18 sano ah. Kooxda maaraynta Volvo CE ee Shiinaha, wakiilada shaqaalaha iyo wakiilada wakiilada ayaa kaqeybgalay munaasabada goobta si wada jir ah loogu dabaaldego daqiiqada sharafta.
Warshada 40,000th Volvo ee Dhismaha Qalabka Shanghai ayaa si guul leh u jartay layntii isku imaatinka.
Li Yan, Madaxweyne Ku-xigeenka iyo Maareeyaha Guud ee Warshadda Shanghai ee Qalabka Dhismaha Volvo (China) Co., Ltd., ayaa yidhi: “Laga soo bilaabo keenistii qotomiyihii ugu horreeyay ee 2003 ilaa Volvo Dhismaha Qalabka Shanghai ee 2018 Wax soo saarka 30,000 ee Warshaddu waxay soo saartay khadkii wax soo saarka, Volvo Construction Qalabka wuxuu qaatay 15 sano isagoo ku tababaranayay kalsoonidayada adag ee sii xoojinta suuqa Shiinaha. Kaliya laba sano kadib, waxsoosaarka guud ee warshadda Shanghai wuxuu dhaafay calaamadda 40,000, taasoo muujineysa inaan xoojinayno awoodda wax soo saar, Ku guuleysanno natiijooyin wax ku ool ah maaraynta wax soo saarka caatada ah. Tani waa mid aan laga sooci karin iskaashiga daacadnimada ah ee u dhexeeya kooxaha kala duwan ee qalabka dhismaha ee Shiinaha, dadaalka dhammaan shaqaalaha, iyo kalsoonida aaminka ah ee macaamiisha. “
Iyada oo ah qayb aan lagama maarmaan u ahayn nidaamka wax soo saarka adduunka ee Volvo Construction Qalabka Tan iyo markii la aasaasay, warshadda Shanghai ee Volvo CE waxay had iyo jeer ku salaysnayd nabadgelyo, oo ay wadday hufnaan, oo ay horseed u ahayd hal-abuurnimo. Iyada oo leh awooddeeda wax soo saar aad u wanaagsan iyo tayada wax soo saarka oo aad u fiican, waxay siisay dammaanad adag shirkadda sii ballaarinta joogtada ah ee howlaha ay ka wado Shiinaha. Marka la eego kor u qaadista habka wax soo saarka iyo nabadgelyada, awoodda wax soo saar ee warshadda Shanghai ayaa ka booday 6-dii cutub ee ugu horreeyay 8-dii saacba mar illaa hadda 27-ka qaybood ee hadda 8-dii saacba mar ah, koror ku dhowaad shan jeer ah; laga bilaabo Diisambar 23 ee sanadkan, aqoon isweydaarsiga shirarka ee warshadda Shanghai wuxuu gaadhay ku dhowaad Diiwaanka maalmaha 3,000 ee shilalka aan shilalka lahayn ayaa aasaasaya gunta hoose ee badbaadada. Sanadihii la soo dhaafay tan iyo markii la aasaasay, Volvo Dhismaha Qalabka Shanghai waxaa amaaney dhamaan qeybaha kala duwan ee nolosha tayada wax soo saarkeeda iyo tayada shaqaalaha oo aad u wanaagsan. Sannadkii 2013, warshadda waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinta Dahabiga ah ee Tayada Shanghai; sanadkii xigay, kooxdii qaab dhismeedka aqoon isweydaarsiga golaha waxaa la siiyay cinwaanka "Pioneer National Worker Pioneer"; 2018, warshadda Shanghai waxaa loo magacaabay cutub muunad ah oo daryeelka shaqaalaha ah ee aagga horumarinta dhaqaalaha iyo farsamada ee Jinqiao.
40,000 cutub waa ka fog yihiin dhamaadka, laakiin waa si sax ah halka ay ka bilaabaneyso warshadda Shanghai inay qaado tallaabo cusub oo ku saabsan horumarinta ganacsiga. Sanadka 2021, taxanaha cusub ee qodayaasha, oo ay weheliyaan taxanayaasha D taxanaha ah ee hada waxsoosaarka, waxay si dabacsan ula kulmi doonaan baahiyaha kaladuwan ee alaabada macaamiisha Shiinaha iyadoo loo marayo faylalka wax soo saarka. Mustaqbalka, Qalabka Dhismaha ee Volvo Shanghai Plant wuxuu kaloo sameysan doonaa iswaafajin Linyi Plant, Jinan R&D Center, Suuqgeynta iyo Iibinta, iyo Xarunta Wax Soosaarka ee Shanghai, iyadoo la adeegsanaayo Volvo Construction Qalabka faa iidooyinka teknoolojiyadda adduunka iyo awoodaha wax soo saar ee maxalliga ah si loo keeno waxtarka iyo hal-abuurnimada waarta iyo kuwa cusub wax soo saarka iyo adeegyadu waxay dhiirrigeliyaan casriyeynta warshadaha mashiinnada dhismaha ee Shiinaha waxayna ku duraan firfircooni hor leh horumarka iyo horumarka bulshada Shiinaha. (Maqaalkani wuxuu ka yimid Qalabka Dhismaha ee Volvo)